Hobart waa magaalad oo kuyaalo dalka Australia. Magaalada Hobart waana caasimada gobolka Tasmaniya. Hobart (/ hoʊbɑːrt / (ku saabsan codkan dhegaysanaya))  waa caasimadda iyo magaalada ugu badan ee gobolka jasiiradda ee Australia ee Tasmania. Dadweynaha ku nool qiyaastii 225,000 (in ka badan 40% dadweynaha Tasmania), waa magaalo-madaxda ugu sareysa Australiya. Hobart, oo hore loo yaqaan Hobart Town ama Hobarton, waa magaalada labaad ee ugu da'da weyn Australia kadib Sydney, New South Wales. Ka hor intaanay ingiriisku degeneyn, degaanka Hobart waxaa lagu qabsaday mudo dhan 35,000 oo sano,  qabiilka Mouheneener ee qabiilka reer miyiga ah, koox ka kooban Nuennone, ama qabiil koonfur-bari. Dhalinyarada reer Aborijiniska ah ee Aborijiniska ah waxay inta badan naftooda ku tilmaamaan 'Palawa'.
Tan iyo markii ay asal ahaan ka soo jeedo gumeysiga, magaaladu waxay ka ballaarisay afka Sullivans Cove ee guud ahaan jihada waqooyi-koonfur ee labada bangi ee Derwent River, oo ka soo jeeda 22 kiiloomitir oo gudaha ah oo laga soo galo xerada Storm Bay ilaa meeshii ay webiga ka riixayaan biyo cusub oo ku yaala Bridgewater.  Gaadiidka ciqaabtu wuxuu ku dhammaaday 1850kii, ka dib markii magaaladu ay soo martay waqtiyo koritaan ah iyo hoos u dhac. Horraantii qarnigii 20aad waxay arkeen dhaqaale kor u kaca xagga dambe ee macdanta, beeraha iyo warshadaha kale ee aasaasiga ah, lumitaanka ragga ee ka shaqeeyn jiray dagaalladii adduunka ahaa waxaa loola jeeda qulqulaad socdaal ah. Inkastoo kor u qaadista socdaalka laga bilaabo Aasiya iyo meelaha kale ee aan Ingiriisiga ku hadlin, dadka Hindiya waxay ku badan yihiin ebola ahaan Anglo-Celtic, waxayna leeyihiin boqolleyda ugu badan ee Australiya dhashay ee ku nool magaalooyinka caasimadda Australia.
Bishii Juun 2016, qiyaasta tirada dadka lagu qiyaasay waxay ahayd 224,462.  Magaaladu waxay ku taallaa gobolka koonfureed ee ku taal dooxada Derwent, taasoo ka dhigeysa magaalooyinka caasimadda ugu badan ee koonfur galbeed ee Australia. Dekedda waxay ka kooban tahay dekadda labaad ee ugu dabiicisan adduunka.  Dhul-mareenka waxaa hareeyay 1,271 mitir (4,170 ft) oo kunanyi / Mount Wellington,  iyo inta badan magaaladu waxay ka kooban tahay dhulka dib loo soo celiyay  Waa qalabka maaliyadeed iyo maamul ee Tasmania, oo u adeegta dukumiinti udubdhexaad ah oo ah hawlgalada Australia iyo Faransiiska ah ee udubdhexaadka ah iyo inay noqoto xarun dalxiis oo waaweyn, iyada oo ka badan 1,192 milyan oo booqdayaal 2011/2012. Meelaha Magaalooyinka waxaa badanaa loo yaqaan 'Greater Hobart', si ay uga soocaan Magaalada Hobart, mid ka mid ah shan degmo oo maxali ah oo magaalada ku daboolan. 
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hobart&oldid=180629"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Sebteembar 2018, marka ee eheed 11:51.